မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်၊ စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ရန် အနည်းငယ်သာလို - Yangon Nation News
Yangon Nation News
COVID 19 သတင်းစုံ
မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်၊ စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ရန် အနည်းငယ်သာလို
မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်၊ စိုးရိမ်ရေအမှတ်ရောက်ရန် အနည်းငယ်သာလို
မန္တလေးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိရာ ဇူလိုင်လ ၂၇ရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်အရ ၁၂၄၃ စင်တီမီတာ၊ ၂၃၀.၁၈ ပေဖြစ်ကြောင်း ဂေါဝိန် မြစ်ရေတိုင်းစခန်းမှ သိရသည်။
အဆိုပါမြစ်ရေသည် ဇူလိုင်လ ၂၆ရက်နေ့ နံနက် ၆နာရီခွဲက ၁၂၂၇ စင်တီမီတာ၊ ၂၂၉.၆၆ ပေ၊ဖြစ်ပြီး မွန်းလွဲ ၁၂နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်မှာ ၁၂၃၂ စင်တီမီတာ ၂၂၉.၈၂ ပေ သို့လည်းကောင်း၊ ညနေ ၆နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်မှာ ၁၂၃၈ စင်တီမီတာ၊ ၂၃၀.၀၂ ပေ သို့ လည်းကောင်း တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့၏ စိုးရိမ်ရေအမှတ်မှာ ၁၂၆၀ စင်တီမီတာ၊ ၂၃၀.၇၄ပေဖြစ်သည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှလည်း ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် နောက် (၃)ရက်အတွင်း စိုးရိမ်ရေအမှတ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာထားရှိပြီး မြစ်ကမ်းအနီးနေရာများနှင့် မြေနိမ့်ပိုင်းများတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် သတိပြုကြရန်လည်း သတိပေးထားသည်။
“ဒီနစ်က ဝါထပ်လို့ ခုအချိန်က ပုံမှန်ဆိုရင် ဝါခေါင်လပေါ့။ရှေးအယူအဆအရ ဝါထပ်နှစ်မှာ တခြားနှစ်တွေ ထက် မြစ်ရေပိုတိုးတယ်။ လက်ရှိမြစ်ရေတက်ပြီးရင် ပြန်ကျသွားပြီး လာမယ့် ဝါခေါင်မှာ မြစ်ရေတက်လာ အုံးမယ်။ အဲဒီကြမှ အောင်ရေလို့ခေါ်တယ်”ဟု ကမ်းနားလမ်းတွင် နှစ် ၂၀ ကြာနေထိုင်ခဲ့သူ ဦးသိန်းလွင် ကပြောသည်။
( Ah Lin Nge )
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာ ကားတစ်စီး ရှေ့ဘီးပေါက်ပြီး တံတားအောက်ထိုးကျ
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသောဒေသများအား ချက်နိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် ပြန်ပြင်မည်
6၇၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ. အထူးဆောင်းပါးများ
702COVID 19 သတင်းစုံ
သရုပ်ဆောင် “ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်” မိသားစုက Civil Disobedience မှာပါဝင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့အတွက် အလှူငွေ သိန်း (၃၀) ကျပ် လှူဒါန်း
နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းဆင်းသက်ခြင်းကို (၂၈-၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် (၂၃:၅၉) နာရီအထိ ခွင့်မပြု
ပြည်ထောင်စုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအား ၅-၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးမည်
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာကို လက်မခံဘူးလို့ အမေရိကန်သတိပေး
ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များအား ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်တို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးမည်
Mask ပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရ Eric Yang ရဲ.ပြောစကား
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ.ဝင်အချို. ဗိုလ်တထောင်ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခံရ
1 EUR 1,929.60
1 USD 1,630.00
1 JPY 1,471.20
1 AUD 1,234.80
1 SGD 1,212.00
1 MYR 392.25
1 THB 392.25
Copyright © 2020. All rights reserved by Yangon Nation News.